(၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာ လုပ်ဆောင်မယ့် အရာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် – Askstyle
(၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာ လုပ်ဆောင်မယ့် အရာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းမင္းသမီးေတြထဲက တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို မအားမလပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္ပဲျဖစ္ပါတယ္..။ ကာ႐ိုက္တာတိုင္းမွာ ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူမရဲ႕ ႐ုံတင္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတိုင္းဟာလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တစ္ခဲနက္အားေပးမႈအျပည့္ကို ရရွိပါတယ္..။ လတ္တေလာမွာ မင္းသားေနတိုးနဲ႔အတူ သူမပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ “ျမက္ႏု” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးဟာလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ အားေပးမႈေတြအျပည့္နဲ႔ ရရွိေနတဲ့ ဇာတ္ကားႀကီးတစ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္..။
အခုတစ္ခါမွာ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ေလးကေတာ့ သူမရဲ႕ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို “ဘဝကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖတ္သန္းမယ္..။ ႐ိုးသားစြာေနမယ္.။ အလုပ္ႀကိဳးစားမယ္.။ ေကာင္းတာေတြလုပ္မယ္.။ အေကာင္းျမင္စိတ္ေလးေမြးမယ္.။ ကူညီထိုက္သူကို ကူညီမယ္.။ ခ်စ္တဲ့သူေတြကို ပိုခ်စ္မယ္.။
ကိုယ့္တန္ဖိုးသိတဲ့သူေတြနဲ႔ ေနမယ္.။ ဆႏၵေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ္.။ အာ႐ုံေနာက္တဲ့ သူေတြနဲ႔ေဝးေဝးေနမယ္.။ အတုအေယာင္ေတြကို ေရွာင္မယ္.။ အေႏွာင့္ ေတြကိုလ်စ္လ်ဴ ရႈမယ္.။ အတိတ္ေတြကို ေမ့ပစ္မယ္.။ အရႈပ္ထဲ ရွင္းေအာင္ေနမယ္.။ ေယာက်ာ္းယူမယ္ (အေမႊေပါ့) .။ အမေလး လုပ္ရမွာ အမ်ားႀကီး .။ resolution2020” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ အလွပုံရိပ္တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္..။
ေ႐ႊကစ္ေလးကေတာ့ (၂၀၂၀)မွာ လုပ္ေဆာင္မယ့္အထဲမွာ “ေယာက္်ားယူမယ္” ဆိုတဲ့ စကားကေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို အံ့ၾသသြားေစမယ့္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲေနာ္..။ ေ႐ႊကစ္ေလး ေျပာတဲ့အတိုင္း (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ တကယ္ပဲ လုပ္မွာလား ဆိုတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါပဲေနာ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ..။ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးေရာ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ေလးကို ေယာက္်ားယူေစခ်င္ၿပီလား ..Single အေနနဲ႔ပဲ ေနေစခ်င္ေသးလား..???
Source: Wutt Hmone Shwe Yi’s Official Page
“(၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာ လုပ်ဆောင်မယ့် အရာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မအားမလပ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင် အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ကာရိုက်တာတိုင်းမှာ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမရဲ့ ရုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးမှုအပြည့်ကို ရရှိပါတယ်..။ လတ်တလောမှာ မင်းသားနေတိုးနဲ့အတူ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “မြက်နု” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြားထဲမှာ အားပေးမှုတွေအပြည့်နဲ့ ရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်..။
အခုတစ်ခါမှာ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်လေးကတော့ သူမရဲ့ (၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာ လုပ်ဆောင်မယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို “ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းမယ်..။ ရိုးသားစွာနေမယ်.။ အလုပ်ကြိုးစားမယ်.။ ကောင်းတာတွေလုပ်မယ်.။ အကောင်းမြင်စိတ်လေးမွေးမယ်.။ ကူညီထိုက်သူကို ကူညီမယ်.။ ချစ်တဲ့သူတွေကို ပိုချစ်မယ်.။ ကိုယ့်တန်ဖိုးသိတဲ့သူတွေနဲ့ နေမယ်.။ ဆန္ဒတွေကို အကောင်ထည်ဖော်မယ်.။
အာရုံနောက်တဲ့ သူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေမယ်.။ အတုအယောင်တွေကို ရှောင်မယ်.။ အနှောင့် တွေကိုလျစ်လျူ ရှုမယ်.။ အတိတ်တွေကို မေ့ပစ်မယ်.။ အရှုပ်ထဲ ရှင်းအောင်နေမယ်.။ ယောကျာ်းယူမယ် (အမွှေပေါ့) .။ အမလေး လုပ်ရမှာ အများကြီး .။ resolution2020” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အလှပုံရိပ်တစ်ချို့နဲ့အတူ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
ရွှေကစ်လေးကတော့ (၂၀၂၀)မှာ လုပ်ဆောင်မယ့်အထဲမှာ “ယောက်ျားယူမယ်” ဆိုတဲ့ စကားကတော့ ပရိသတ်တွေကို အံ့သြသွားစေမယ့်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲနော်..။ ရွှေကစ်လေး ပြောတဲ့အတိုင်း (၂၀၂၀)ခုနှစ်မှာ တကယ်ပဲ လုပ်မှာလား ဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲနော် ပရိသတ်ကြီးရေ..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးရော ဝတ်မှုန်ရွှေရည်လေးကို ယောက်ျားယူစေချင်ပြီလား ..Single အနေနဲ့ပဲ နေစေချင်သေးလား..???